Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan walxaha kiimikada - Bogga 1 | Isleegyada Falcelinta Kiimikada
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan walxaha kiimikada - Bogga 1
Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan walxaha kiimikada - La cusbooneysiiyay 2022
Waa maxay waxyaabaha ka jira Dhulka, Caalamka ama shaybaarka. Masiirka curiyaha cusub, sharafta iyo dhibaatada masiibada ugaarsadeyaasha cusub ... Sahaminta cusub ee walxaha kiimikada ee xarumaha waaweyn ee cilmi baarista adduunka oo dhan waxay ka caawisaa ninka inuu ballaariyo heerka labaad, soo ogaado waxyaabo badan oo xiiso leh oo ku saabsan dunida dabiiciga ah.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan helium
Helium waa cunsurka ugu horreeya ee gaaska ee miiska nidaamka xilliyadeed. Adduunyada, waxay ku jirtaa kaalinta labaad marka loo eego hydrogen-ka aasaasiga ah.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan lithium
Lithium waa curiyaha biraha alkali, oo ku dhexjira unuga sadexaad ee nidaamka miiska xilliyeed. Lithium waa kan ugu fudud dhamaan biraha adag wuxuuna goyn karaa mindi.
Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Beryllium
Beryllium waa biraha dhulka alkaliin ugu fudud. Beryllium waxaa laga helaa dhagaxyo qaali ah sida emeralds iyo aquamarine. Beryllium iyo xeryahooda labaduba waa kansar.
Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Kaarboonka
Kaarboonku waa cunsur aan macdan lahayn oo ku jira unugga lixaad ee miiska nidaamka xilliyadeed. Kaarboonku waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha oo dhan, waxaa sidoo kale loo yaqaannaa dhabarka.
Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Nitrogen
Nitrogen waa cunsur aan macdan lahayn oo ku jira unugga 7aad ee miiska xilliyeed. Maaddaama ay tahay maaddada ugu weyn ee hawada, waxay soo saartaa midabbo dhalaalaya oo qurux badan.
Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Ogsijiin
Ogsijiin waa curiye aan macdan lahayn oo ku jira unugga 8-aad ee miiska xilliyeed. Waa cunsurka saddexaad ee ugu badan koonka iyo walxaha ugu badan ee aadamaha ku jira.
Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Neon
Neon waa gaas dhif ah oo ku jira unugga 10-aad ee miiska nidaamka xilliyadeed. Waa cunsurka afaraad ee ugu badan uguna caansan adduunka oo ku ifaya calaamadaha ganacsiga.
Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Fluorine
Fluorine waa wax aan caadi ahayn, aadna u firfircoon oo aan bir ahayn. Waa midka leh koronto-koronto ugu sareysa dhammaan walxaha.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan chromium
Chromium wuxuu xubin ka yahay kooxda curiyaha birta. Waxaa la ogyahay inay kudareyso dhalaal iyo qiimo macdanta.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Nickel
Nickel waa birta shanaad ee birta ugu badan ku wareegga, kuna dhacda tiro badan dhulka dushiisa iyo xuddunta. Nikkel ay weheliso birtu waa laba waxyaalood oo caan ku ah mete
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Cobalt
Cobalt-ka aasaasiga ahi wuxuu leeyahay qurux aan la rumaysan karin, xoog iyo sidoo kale iskaashi aad u fiican. Cobalt waa bir qalin aad u adag oo dhalaalaya sidoo kalena aad ayey u sarreeysaa.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Birta
Birta waxaa loo yaqaanaa inay tahay cunsur udub dhexaad u ah nolosha Dunida. Waxay muhiim u tahay jirka bini'aadamka waxaana loo isticmaalaa waxyaabo badan oo guryaha ku jira.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Manganese
Manganese - waa cunsur ku yaal asalka dhirta 'photosynthesis', wuxuu la dagaallamaa xagjirnimada bilaashka ah, wuxuu xoojiyaa birta, abuurista qanjirro qarsoodi ah
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Vanadium
Vanadium waa cunsur lagu yaqaan taariikh wareer leh waxaana la ogaaday labo jeer. Magaca Vanadium waxaa loogu magac daray ilaahadda quruxda badan ee Scadinavia "Vanadis".
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Titan
Magaca Titan waxaa loogu magac daray ilaahkii Griiga, oo ah cunsurka sagaalaad ee ugu badan qolofta dhulka.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Scandium
Scandium waa biraha ugu horreeya ee kala-guurka, markii ugu horraysay laga helay dhammaadkii qarnigii siddeed iyo tobnaad iyo qaybta 36aad ee ugu badan qaybaha dhulka.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Kaalshiyamka
Kalsiyum waxaa lagu yaqaan inuu yahay dhismaha ugu weyn ee lafaha, kan 5aad ee ugu badan qolofta dhulka. Isku-darka guud ee kaalshiyamka, kaalshiyamka kaarboont, ayaa caadi ahaan loo yaqaan
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan hydrogen - waa curiyaha ugu fudud miiska xilliyeed.
Haydarojiin waa cunsurka ugu horreeya miiska nidaamka xilliyadeed. Hydrogen waxaa lagu yaqaan inuu yahay kan ugu fudud, uguna badan adduunka, waa cunsurka ugu muhiimsan nolosha
Kiimikada tijaabada sixirka
Chemistry nolol maalmeedka
Hal abuurnimo weyn oo kiimiko ah
Chemist caan ah oo xiise leh